Wararkii ugu dambeeyay ee Ahlusunna oo weerartay Dhuusamareeb, & dagaalo socda – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Wararkii ugu dambeeyay ee Ahlusunna oo weerartay Dhuusamareeb, & dagaalo socda
May 13, 2022 Xuseen 13
Dagaalo goos goos ah ayaa ka soconaya caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, kuwaas oo u dhexeeya Ciidanka Galmudug iyo Ciidanka DFS oo isku dhinac ah, iyo Xoogaga Ahlu-sunna.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah, uu yimid kaddib markii dagaalamayaasha Ahlu-sunna ay qabsadeen qeybo kamid ah magaalada Dhuusamareeb.
Labada dhinac ee ku dagaalamaya gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa mid walba waxa uu guulo ka sheegtay dagaalka. Sidoo kale xaafado kamid ah caasimadda Galmudug ayaa waxaa ka soconaya barakac xooggan,
Sarkaal u hadlay kooxda Ahlusunna ayaa sheegay inay qabsadeen inta badan xaafadaha Dhuusamareeb, ayna rajeynayaan in si dhameystiran ula wareegaan magaalada. Dhanka kale, Guddoomiye kuxigeenka degmadda Dhuusamareeb ayaa sheegay inay iska caabiyeen maleeshiyaad kamid ah Ahlusunna oo kusoo duulay caasimadda Galmudug.
Ehelu suno mahan waa Ehelu
SHAYDAAN waan ka adkaandoonaa
Waan buubaa waa been
Waxaan waa silsilad qalbidhagax baahane ehelu
Shaydaan kenya imaaraad
Waay wada socdaan ee soomali
Dalkiina difaacada dhusamareeb mahad iyo caano ayaa
Aay kunoolaayeen xataa dadku
Wuu isbadalay somalay
Cadowga umidoobaa farmaajo
Hadii uu sonoqdo waxaan
Waay kalacari doonaan
One day laft our election in
Allaah farmaajo will be winer,,,
War kuwaan nadaam iyo waxqabsi haka sugina. MOORYAAN WAA MOORYAAN. ODEYGII DHABANCAD IYO BAAHANE KU TUSAALE QAADO… Yaa kaloo wax ku tuhmeysaa Cabdiqybdiid, Fiqi, A Shakur or Mahad Salaad? Dadkaas miyaad ka sugeysaa inay wax furdaamiyaan? Ha u fadhiyina.
WA HALKII RER BARIGA MADURBA MARKII HOREYBA HABARGIDAAR WAXEEY ISKU RACEEYN IN RAGA LEYSKA DHAMEEYN SA HARTIGA INAGA ADKANAYEE MAXAA KUXIGEY DAGALKII CADAADO DF CIDAMADEEYDA KASARTEY ALHALAAG HADA WAXEEY ISKU SO BEGEEYN DORASHADA KASOCOTA XAMAR MADAXWEYNAHA XAF AYAA KURSIGA 1HEYLAYA MARKASU MARKU GAYILO MIRGAAMO KABAYASHA DHAGALAHA ADIGU DOWLAD DHAGAAGDEY USAMEYN DONAA HABARHIDARLAND
Horta magacaan Ahlu Sunna xagee ka yimid ma mad”hab cusub baa?
Waxaan awal khaati ka taagnayn kuwo isku kaysta mad’hab hebela waxay qabtaa iyadoo aanay quraan iyo xadiith midna kujirin madhab hebla raac.
Hadii qofku aamino/rumeeyo in aan ALLAAH cidna ka xigin ee uu toos isaga u caabudo wuxuu ka xoroobayaa Urur hebel, Sh hebel iyo wixii la mid ah oo wada ganacsato ah. lkn markaan soo barbaaray baan Xer iyo itixaad iyo magacyadaan jaha wareerka ah oo la inoo samaystay ku dhex lunay, hadaan quluubta xor ka ahaan lahayn sidaan isumaanaan cuneen ee waxa ALLAAH kitaabkiisa kuyaal baan isku xukumi lahayn.
Waxaana waxaa abuuray oo noo soo min guuriyey qolyaha kaniisadaha oo ah meelo ganacsi oo pastor ka iyo kuwuu u shaqeeya ay gaalada jaha wareersan wax uga gurtaan inagana urur hebel iyo sh hebel baa la inoo samaystay oo hadaad maanta mid wax ka sheegtay kan dad kuu xiga baa kula dagaalaya ama kunacaya waayo maskaxdiisa baan xor ka ahayn waxaan oobdhan.
ALLAAH BAAN TALO SAARANAY
Dhabcan FIQI ayaa soo abaabulay dagaalkan isagoo ku xumay isleh Farmaajo laakiin dad walaalo ah ayaa islaynayaa.
Ma Dhuusa-mareeb bay haddana ka dhex taagantahay?!
Jamhuuriyaddii Soomaaliya (ee teedsanayd min Lawyacaddo illaa Liboye/Dhoobley) waxa iskudiraya ee sidaa u kala qoqobay waa wixii markii horeba burburiyey oo lasii saddex jibbaaray. Marba meel uun bay ka hoos qarxaysaa mooyaane waa isku wadamid; waa wada “madax kanool”. Maamul xumo & nidaam xumo waa laga kariwaayey Soomaali, haddana waxa ay rabaan in ay sida biniaadamka kale u noolyahay u noolaadaan oo qaran noqdaan.
Aniga oo aan weligay taageerin Suufiyada, haddana, waan ka soo horjeeday dagaalkii kal hore lagu qaaday Suufiyada & maamulkoodii lagu beddelay dagaalkaba. Wax kale ugama soo horjeedine waxa ii muuqatay in haddii meesha laga saaro aan maamul-wanaag lagu beddelayn, ee iyaga uun meesha laga riixanayo. Sababteediina way muuqataa, maxaa soo celiyey? Waxaa soo celiyey maamul-xumo, nidaam xumo & qorsho xumo ay kuwii meesha ka riixday sameeyeen. Haddii ay maamul-wanaag la imaan lahaayeen dagaal danbeba madhaceen. Sidaa si le’eg, Boosaaso wixii ka dhacayna lamid bay ahayd. Wax la isdhaamo oo maamul wanaag ahi maba jirto.
Gunaanadkii, waxaa jamhuuriyadda isku diraya ee ay marba meel uga qarxaso waa maamul xumo, nidaam xumo & hoggaamin xumo la caadaystay. Kuwa hadda xasiloonida sheegtana, haddii aysan isdaba qaban, umana muuqato in ay isdabaqabanayaane, xaalkoodu waxa uu ku dhammaandoonaa sida hadda ka socota Dhuusamareeb. Maalin uunbay ku qarxaysaa miinada ay huursanayaan ee madax kanoolnimada & maamul xumadu ugu horreeyaan.
Dad culimo in ay yihiin sheeganaya oo hadana dadka islamka ah naftooda iyo maalkooda xalalaysanayaa xagee ka keeneed doqooninada waxan leeyahay dadka reer Galmudug iska difaaca dalimiinta
Horta magacaan Ahlu Sunna xagee ka yimid ma madhab cusub baa?
Waxaan awal khaati ka taagnayn kuwo isku kaysta madhab hebela waxay qabtaa iyadoon quraan iyo xadiith midna kujirin madhab hebla raac.
Hadii qofku aamino/rumeeyo in aan ALLAAH cidna ka xigin ee uu toos isaga u caabudo wuxuu ka xoroobayaa Urur hebel, Sh hebel iyo wixii la mid ah oo wada ganacsato ah. lkn markaan soo barbaaray baan Xer iyo itixaad iyo magacyadaan jaha wareerka ah oo la inoo samaystay kuna dhex lunay, hadaan quluubta xor ka ahaan lahayn sidaan isumaanaan cuneen ee waxa ALLAAH kitaabkiisa kuyaal baan isku xukumi lahayn.
Waxaana waxaa abuuray oo noo soo min guuriyey qolyaha kaniisadaha oo ah meelo ganacsi oo pastor ka iyo kuwuu u shaqeeya ay gaalada jaha wareersan wax uga gurtaan inaga urur hebel iyo sh hebel baa la inoo samaystay.
ALLAAH BAAN TALO SAARTAY
Farmaajo oo ku hungoobay Qoor Qoor xildhibaana ka wayay ayaa hurinaya dagaalka waana iska cadahay.
Farmaajo,waa idinkaga dhagtay,maxaa meesha keenay Farmaajo,dabadhilif yahow dabadhilifka dhalay?
Qaar madoobe qaarmadoowe kale Ku sul meeraysanaya ayaa u jeedaa,haddii ay run sheegataan Caabudwaaq,Balanballe iyo Dhabad maxay u tagi waayeen? Anigu reer Gedo ayaan ahay,laakiin dadkayga ayaa joogaan Galgaduud,igu soo orod maa aha dadkaasi.
Boowe Puntland baa ka dambaysa.